Mogadishu Journal » Maxkamad xukun ku riday labo ruux oo dil ka geystay Qardho
Maxkamad xukun ku riday labo ruux oo dil ka geystay Qardho
Mjournal :-Waxaa maanta Maxkamadda darajadda koowaad ee Magaalada Qardho la horgeeyay labo eedaysane oo loo haysto inay dileen Marxuum lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan C/laahi Axmed, kaasi oo dhawaan maydkiisa laga helay Wadada u dhexeeysa Magaalooyinka Qardho iyo Garowe.
Ragga maanta ay xukuntay maxkamada ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Axmed Cabdi Nuur Siciid Iyo Bashiir Maxamed Siciid.
Sidoo kale Maxkamada ayaa shaacisay in xukun dil ah lagu ku riday labadan qof oo horay dil ka geystay Magaalada Qardho.
Maxkamada ayaa amartay in xabsiga lagu hayo labadan nin si loo baaro dambiga loo haysto,Maadamaa ay labaddan nin ku xukuman yihiin dil toogasho ah.
Madaxweyne Farmaajo oo maanta ku sii jeeda magaalada Addis Ababa